Xisbiga waddani oo ku eeddeeyey Xukuumadda inay ka hor-istaagtay dayac-tirka Garoonka Burco
Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xisbiga WADDANI oo ku dhaliilay Xukuumadda dayaca Garoomada Ciyaaraha ee dalka….
Hargeysa(GNA)-Xoghayaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xisbiga Mucaarika ah ee WADDANI Yoonis Axmed Yoonis, ayaa sheegay inay dawladdu u diiday dayactir xisbigoodu ku samaynayey garoonka Kubbada cagta ee Burco oo dumay.
Shir-jaraa’id oo uu Arbacadii shalay ku qabtay Magaalada Burco, ayaa ku sheegay in garoonkaa iyo kuwa kale ee Gobolada bariga ku yaallaa dayacan yihiin, kana gaabisay Xukuumaddu wax ka qabashadooda.
Yoonis Axmed Yoonis, ayaa sidaasoo ay tahay dhalinyarada ku dhiiri-geliyey inaanay ka niyad-jabin horumarinta mihnaddooda ciyaareed, waxaanu intaa ku daray in Xisbiga WADDANI haddii uu talada dalka ku guulaysto uu kor u qaadi doono Ciyaaraha.
Garoonka Kubbada Cagta ee Burco, ayaa bilo ka hor waxa dumiyey Roob weyn oo ka da’ay Magaalada, kaasoo khasaare u geystay Dhismaha garoonka.
Previous: Af lagaado & Cay midna eedu kuma sama!
Next: Muxuu Axmed Jaambiir uga baxay Kulmiye? Muuqaal
Madaxweyne Biixi oo la Orday Mo Faarax
Gabiley: Xisbiga WADDANI oo agab Ciyaareed guddoonsiiyey 25 Kooxood
Dallada SONYO Iyo Shirakada Game Oo Daah Furay Tartan Kubada Cagta ah
Xukuumadda Siilaanyo oo lagu dhaliilay inay gaabisay horumarinta Ciyaaraha
Xisbiga Waddani oo soo gaba-gabeeyey ‘tartan ciyaareed Hargeysa’
Tartanka Kubadda Kolayga oo ka furmay Garoonka Timo-cadde